လူတစ် ဦး သည်မွေးနေ့ဖြစ်ပါကပုံမှန်အားဖြင့်မိသားစု ၀ င်များနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများသည်၎င်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားမိကြသည်။ အကျွန်ုပ်သည်ဤလောကသို့ကြွလာရသောနေ့ဖြစ်ပါ၏။ တခါတရံကျွန်ုပ်တို့မွေးနေ့ပွဲကိုမည်သို့နှုတ်ဆက်ရမည်ကိုမသိရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာသောသူတို့ကိုပြုစုခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသော (ပျော်စရာ၊ လှပမှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ) နှင့်မည်သူမဆို (မိခင်၊ ကလေးများ၊ အစ်မ၊ ကလေးများ) ရှိခြင်း။ မင်းတို့သူတို့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မင်းတို့လိုအပ်တာကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ကိုရိုးရိုးလေးနှင့်ပျင်းစရာကောင်းစွာဖြင့်ပေးခြင်းသည်မလုံလောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြွင်းသောအရာမှထွက်ခွာသွားရန်အကြိမ်များစွာလိုလားတောင့်တသည်။ ဒါပေမယ့်သူကလူကိုထိခိုက်သောသူတို့ကိုအသေးစိတ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည်မည်မျှပျော်စရာကောင်းပြီးအထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်အားပေးခဲ့သောမွေးနေ့ကဒ်ကိုအမြဲအမှတ်ရနေသည်။ ၎င်းသည်အခြားသူများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပြီးထိုနေ့ကိုသူတို့သတိရသည်။
လက်ဆောင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့ရသောရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ ယ်နိုင်သည်။
အင်တာနက်ပေါ်ရှိသင်ခန်းစာများ (DIY) ၏အကူအညီဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသောမယုံကြည်နိုင်လောက်သောဒီဇိုင်းများ။
၎င်းတို့ကိုထူးခြားစေရန်နှင့်အထူးပြုလုပ်ရန်စိတ်ကြိုက်ဗွီဒီယိုများ (သို့မဟုတ်သီချင်းများ) ။
နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည် ငါတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ ဥပမာအားဖြင့်မိခင် (သို့) ဖခင်တစ် ဦး သည်အခြားဇနီးမောင်နှံနှင့်အတူပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့်ကလေးများကိုထားရန်ချစ်သောသူ၊ ငါဒီအခမ်းအနား၏နေ့ကိုစတင်ရန်မပိုကောင်းလမ်းမရှိထင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်မကြာမီသင်၏အမေသို့မဟုတ်အဖေသည်မွေးနေ့ဖြစ်ပါကဈေးဝယ်ထွက်ပြီးထိုနေ့တွင်သင်အသုံးပြုမည့်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုလေ့လာပါ။
အကောင်းဆုံးအချက်မှာနောက်ဆုံးအသေးစိတ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ နံနက်စာစားဖို့အိပ်ရာဝင်ဖို့အကြံပေးတာကိုများများထပ်ခါတလဲလဲလုပ်မိနိုင်တယ်၊ ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီတစ်ခါ menu ကိုမရေးတာလဲ။ ဒါကြောင့်မွေးနေ့ကသူမနက်စာအတွက်ဘာရှိမယ်ဆိုတာရွေးနိုင်အောင်။ သင်သည် pancakes ကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးသင်၏ဂုဏ်ပြုလွှာများကိုလည်းရေးသားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်မသိသည်မှာ၎င်းသည်မူရင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်စေပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဖိစီးမှုသည်ကောင်းသောအရာများကို ဦး တည်ခြင်းမရှိဟုအမြဲတမ်းဖော်ပြခဲ့သည်။ လူတစ် ဦး သည်သင်ပြုလုပ်သောမည်သည့်အသေးစိတ်ကိုမဆိုတန်ဖိုးထားမည်ဟူသောအချက်အပြင်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်မှန်ကန်သည်၊ သင်ဘာလုပ်ချင်သည်ကိုကြိုတင်ရှာဖွေပြီးကောင်းစွာစီစဉ်ပါ။
၏အတော်များများက မွေးနေ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကား သင်ဤဆောင်းပါး၌တွေ့မြင်ရလိမ့်မည် ဒါကြောင့်သူတို့ကလုံးဝထူးခြားတဲ့မရှိကြပေ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးရန်အတွက်သူတို့ကိုလှုံ့ဆော်မှုရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ်သို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောဂုဏ်ပြုလွှာများမှစကားစုအချို့ကိုပေါင်းစပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးသည်။
လူတွေဟာငါတို့တွေအကြီးအကျယ်သွားတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်လက်နဲ့တစ်ခုခုလုပ်တဲ့အခါလူတွေကဒါကိုနှစ်သက်ကြတယ်။ ငွေသည်အရာရာတိုင်းမဟုတ်ပါ၊ ရည်ရွယ်ချက်သည်အရေးကြီးသည်၊ အင်တာနက်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့ဓာတ်ပုံအကော်ဒီယန်းကိုမင်းဒီဇိုင်းဆွဲချင်ရင်ဆက်လုပ်ပါ။
ထိုအရာကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေရန်စိတ်ကူးအချို့ပေးနိုင်ပါသည်။
«မွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုကျွန်ုပ်ဝယ်ယူသောအခါကျွန်ုပ်၏ဘတ်ဂျက်ကိုအမြဲတမ်းကန့်သတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ယခင်မွေးနေ့တွင်လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးအပ်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ငါဒီနှစ်အတွက်စျေးပေါတဲ့လက်ဆောင်ကိုကောက်နေတာဘယ်သူကိုခန့်မှန်းမလဲ သင်အတိအကျနှင့်ကောင်းစွာအတွက် ... ဂုဏ်ယူပါတယ်! »။
«မွေးရာပါမွေးနေ့။ မင်းမွေးနေ့အရမ်းဆိုးတာ။ နောက်တစ်ခါထပ်မတွေ့တော့အောင်ဆင်တစ်ကောင်ကသင့်ကိုနှိပ်စက်ပါစေ” ။
"နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ များစွာသောနှစ်များကိုသင်တွေ့ဆုံနိူင်တယ်။ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ပါနဲ့"
“ နှစ်တွေဟာ snot လိုပါပဲ၊ များများရလေလေအသက်ရှူဖို့ခက်ခဲလေလေ။ ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့!"။
"ဒီနေ့မင်းရဲ့မွေးနေ့ပဲ။ မင်းကိုပါတီပွဲတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုခေါ်ဖိတ်မယ်။ ငါမင်းကိုချီးကျူးချင်ပါတယ်။ "
«အသက်ကြီးလာတာကပျော်စရာလို့ထင်လား။ သင်သည်မှန်ထဲ၌မိမိကိုယ်ကိုမြင်တွေ့သည်အထိစောင့်ပါ၊ သို့မှသာသင်သည်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ရယ်မောနိုင်သည်။ ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့!"။
"သွားတွေရှိနေတုန်းသင်လိုချင်သမျှရယ်မောပါ။ ပြုံးပါ။ "
“ ခေတ်ကအရေးအကြောင်းတွေထပ်ဖြည့်စွက်ပြီးပျော်ပျော်ပါးပါးပျောက်သွားတယ်၊ ပြmultiplနာတွေများပြားလာတယ်။ ဒါကြောင့်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
“ မိုးရွာတာနဲ့ကန္တာရထဲမှာနေရောင်ခြည်တွေပြည့်နှက်နေသလိုကောင်းကင်မှာကြယ်တွေလိုပဲပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးရစေချင်တာပါ။ ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့!"
«ကျွန်ုပ်၏အဆွေခင်ပွန်းများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးပွေ့ဖက်မှုအတွက်။ ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့!"
«မင်းမွေးနေ့မှာမင်းရဲ့အထူးအချိန်လေးတွေ၊ ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစရာအချိန်ကာလတစ်ခုလုံးကိုသတိရချင်တယ်။ ပြီးတော့တစ်နှစ်တာရဲ့နောက်ထပ်တစ်နှစ်တစ်ခေါက်ကိုငါမှတ်မိချင်တယ်။ »
«နှစ်တစ်နှစ်စီတွင်၊ သင်သည်ကျွန်ုပ်ကို ပို၍ သွေးဆောင်ဖြားယောင်းသည်၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလှည့်သည်၊ သင်သည်သင်၏အပြုံးနှင့်ထာဝရအသက်ရှင်လိုသောဆန္ဒကဲ့သို့ထာဝရဖြစ်သည်။ ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့!"
မင်းရဲ့မွေးနေ့ကိုငါ့ပြက္ခဒိန်မှာအမှတ်အသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာ၊ ငါ့ဘဝမှာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ပါသူငယ်ချင်း!"
“ ဘုရားသခင်ကကျွန်တော့်ကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်မှတ်ဥာဏ်ကောင်းစေဖို့ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်။ အမှန်တရားကတော့မင်္ဂလာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ၊ သင့်ကိုငါချီးကျူးပြီးပြီဆိုရင်ငါမမှတ်မိဘူး”
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » ကွဲပြားခြားနားသောလူများအတွက်အမျိုးမျိုးသောစတိုင်များ၏မွေးနေရေးနှုတ်ခွန်းဆက်သ
ကာရိုလိုင်းနား Cruz ဟုသူကပြောသည်
ဤမွေးနေ့ပွဲသည်မည်သူမဆိုအတွက်ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ သူတို့အားကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမျှဝေရန်ကြိုးစားသည့်အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်!
Carolina Cruz အားပြန်ပြောပါ